निर्देशक साम्तेनको नयाँ फिल्ममा आर्यन ? « Mazzako Online
निर्देशक साम्तेनको नयाँ फिल्ममा आर्यन ?
निर्देशक साम्तेन भुटियाको नयाँ अनटाइटल प्रोजेक्टमा अभिनेता आर्यन सिग्देलले काम गर्ने भएका छन् । उक्त फिल्मका लागि आर्यनलाई चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक दिएर अनुबन्धित गराइएको निर्देशक साम्तेन बताए । फागुनबाट छायांकन सुरु हुने उक्त प्रोजेक्ट कमेडी जनरामा निर्माण हुने बताइएको छ । फिल्ममा किरण दाहाल र सन्देश अर्यालको कथा रहने छ ।
फिल्मको कथाबस्तुलाई आर्यनले न्याय गर्न सक्ने भएकाले उनलाई सेलेक्ट गरिएको निर्देशक भुटियाले बताए । साम्तेनले आर्यनभित्र लुकेको एउटा पाटो फिल्ममा देखाउन लागेको बताए । अब आर्यनलाई कमेडीमा जनरामा देख्न पाइने भएको छ ।
आर्यनको अपोजिटमा रहने नायिका भने फाइनल गरिसकिएको छैन । फिल्मका लागि हिरोइन नयाँ वा मार्केटमा चलेका जो पनि हुनसक्ने बताइएको छ । फिल्ममा आर्यनसँगै कलाकार भोलाराज सापकोटा पनि अनुबन्ध भइसकेका छन् । फिल्ममा उनी निर्दे्शित नयाँ फिल्म ‘अनागत’ माघ ११ मा रिलिज हुँदैछ ।